ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သလား . . . – Healthy Life Journal
ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်သလား . . .
မေး. ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသင့်ပါသလား။
Phyu Phyu Shame (FB)
ဖြေ. ရေကျောက်ကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်၊ ကိုယ်ခံအားနည်းလွန်းသူ၊ စတီးရွိက်ဆေးတွေ မှီဝဲနေသူ၊ တခြားပြင်းထန်နာတာရှည် ရောဂါရှိသူ၊ တချို့ နာတာရှည် သွေးဆဲလ်ရောဂါရှိသူနဲ့ အရင်ဖြစ်ဖူးသူတွေကလွဲရင် ထိုးနှံထားနိုင်ပါတယ်။
Related Items:checken pox, Vaccine
အသက် ၉ နှစ်အရွယ်သားကို ကာကွယ်ဆေးထိုးရန် ငြင်းဆန်သဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူထောင်ကျ
ဘီပိုးကာကွယ်ဆေး ဘယ်လိုထိုးရမလဲ . . .